अर्को ग्रहका मानिसहरु पृथ्वीमा आएको रहस्य बेलायतमापनि भेटियो, विश्वभरी सन्त्रास ! - Aajako Nepali Khabar
Home विदेश अर्को ग्रहका मानिसहरु पृथ्वीमा आएको रहस्य बेलायतमापनि भेटियो, विश्वभरी सन्त्रास !
विदेश admin December 8, 20200Comment
काठमाडौं । विश्वमा पछिल्ला दिनहरुमा लगातार एक रहस्यमय कुरा लगातार देखा पर्न थालेको छ । धेरै अनुशन्धानकर्ताहरुले नै अर्को ग्रहका मानिसहरु पृथ्वीमा आएर केहि चमत्कार गरिरहेका आँकलन गर्न थालेपछि विश्वभरी सन्त्रास फैलिएको हो ।
मोनोलिथ्सको रहस्यलाई ट्र्याक गर्नेहरूले एउटा दृष्यलाई लिएर चकित बनिरहेका छन् । फेरी अर्को एउटा उत्सुक संरचना भेट्टाइयो, यस पटक बेलायतको दक्षिण तटबाट टाढा पर्ने आइस्ल अफ वेटमा फेला परेको छ ।
यस भन्दा पहिले १० फिट अग्लो चाँदीको संरचना अमेरिकी दुर्गम दक्षिण पूर्वी यूटाको रातो चट्टानहरूमा देखा परेको थियो । अनौठो लाग्ने कुरा के छ भने त्यो देखिएको केही समयमा एकाएक हट्यो । तर यस्ता मोनोलिथ्सहरू अन्य क्षेत्रहरुमा पनि देखा पर्न थालेका छन् ।
मोनोलिथ्स रोमानियाको जंगलमा र क्यालिफोर्नियाली पहाडको टुप्पोमा देखिएको थियो । तर दुबै मान्छेहरु त्यहाँ आईपुग्ने बित्तिकै गायब भए । यसै बीच, नेदरल्याण्ड्समा यस सप्ताहन्तमा त्यस्तै संरचनाको बारेमा रिपोर्ट गरिएको थियो । सबैभन्दा भर्खरको ईथरियल अफर आइतवार दिउँसो आइटल अफ द वेटको दक्षिणपश्चिमी तटमा रहेको कम्प्टन बीचमा देखियो ।
स्थानीय निवासी ली पेकमले सीएनएनलाई भने, ‘मेरी श्रीमती र म हाम्रो कुकुरसँग हिंड्दै थियौं । हाम्रो मनपर्ने समुद्री किनारमा, एकाएक अनौठो बस्तु देख्यौँ ।’ उनले थप्दै भनेका छन्, ‘हामीले यसबारे केही पनि सुनेका थिएनौं तर अरूले स्पष्ट रूपमा देखिएपछि त्यहाँ हेर्ने धेरै मानिसहरू आइसकेका थिए ।’
तर अन्य रहस्यमय संरचनाहरू जस्तै, निवासीहरू कहाँबाट आए भन्ने कुरामा यकिन भएको छैन । उनले सीएनएनलाई भने, ‘मलाई थाहा छैन यो त्यहाँ कसरी पुग्यो र मलाई पक्का छैन कि स्थानीयहरूले पनि यो कहाँबाट आयो भन्ने आधार पाएका छैनन् । हेर्दा चमकदार खम्बा छ । कसले किन राखियो भन्ने यो गाउँभरी कसैलाई एकिन छैन ।
हामी अझै यसको अनुसन्धान गर्दैछौं त्यसैले यसलाई हटाउने हामीसँग कुनै तात्कालिक योजना छैन तर समुद्री तट सुरक्षित रहन र भीडभाड नहोस् भन्ने कुराको लागि हामीले अर्को केही दिन अवलोकन गर्नु आवश्यक छ ।